Mari-nehupfumi, 07 Kurume 2019
China 7 Kurume 2019
Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri muAmerica Zvokurudzirwa Kunotanga Mabhisimusi Kumusha
Gurukota rezve mari, Muzvinafundo Mthuli Ncube, varikukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitangewo mabhizimisi munyika.
VaRashid Mahiya Vanobvisiswa Chiuru Chemadhora EkuAmerica Sechibatiso
Dare repamusoro nhasi rabvumira kuti mukuru wesangano reHeal Zimbabwe, VaRashid Mahiya, vabvise mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Zimbabwe Inoti Hapana Chakaipa Kubhadhara Zviuru zveMadhora Kuti Zvirango Zvibviswe
Hurumende yeZimbabwe iri kubhadhara mari inosvika zviuru mazana mashanu pagore kukambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti iibatsire kuti ibvisirwe zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nemakambani ayo.
VaMnangagwa Voshandisa Sahwira waVaTrump Kugadzirisa Hukama Hwavo neAmerica
Hurumende yaVa Emmerson Mnangagwa inonzi yahaya kambani yemagweta ine mukurumbira muAmerica, uye inodyidzana nemutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, kuti ishande mukuvakiridza hukama hweZimbabwe neAmerica.
VaMthuli Ncube Vanoramba Kutaura neVatori veNhau muWashington
Gurukota rezve mari, Va Mthuli Ncube, havana kuda kutaura nevatori venhau, kana kutorwa mavhidhiyo vachitaura, pamusangano wavakaita muWashington neChitatu manheru.
VaChamisa Voshushikana neMamiriro Akaita Zvinhu muNyika
Mutungamiriri webato rinopikisa reMDC, VaNelson Chamisa vanoti vari kushushikana zvikuru nekutambura kuri kuita vanhu munyika uyewo vakati vari kugadzirira musangano wavo weCongiresi zvakanaka.
Brigadier General Emilio Munemo Voitwa Gamba reNyika
Brigadier General Emilio Munemo avo vakashaya nemusi weSvondo mushure mekurwara kwenguva yakareba vaitwa gamba renyika.
Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri Mune zveMabhizimusi Zvosangana naVaNcube muD.C.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvine mabhizimusi kana zvinoda kuzotanga mabhizimusi kumusha zviri muAmerica zviri kuwaniswa mukana wekusangana negurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, kuti vanzwe zvinokwanisa kuitwa kuti vatange mabhizimusi kumusha.
Meya veKwekwe Amai Kasipo Voshanyira America
Meya yeguta reKwekwe amai Angeline Kasipo vanoti vari kufadzwa nezvidzidzo zvepamusoro vavari kuwana muAmerica umo vari kushanya kwevhiki rino pasi pechirongwa chiri kukokerwa ne sangano re Women’s Democracy Network.
Hurumende Inoti Ichiri Kuda Kudyidzana neAmerica Kunyangwe Yakatemerwa Zvirango
Hurumende inoti iri kuenderera mberi nechirongwa chayo chekugadzirisa hukama hwayo nedzimwe nyika zvisinei nekuti sangano reEuropean Union neAmerica zvakawedzera zvirango zvadzakatemera mamwe makambani nevamwe vakuru vakuru muhurumende negore.